5 Magburu onwe New Indie Video Games na gam akporo | Gam akporosis
Izu ụka ndị gara aga anyị nwere incorporation nke usoro egwuregwu akwa mma na indies nke kwesiri igosi gi na ndepụta nke ise. Egwuregwu Indie nke ndị otu opekata mpe na-ahazi na nke ahụ na-enwekarị isiokwu na igwe dị iche na nke anyị maara.
Ọ bụrụ na ụbọchị gara aga, emere m otu nhọrọ nke 5 indie masterpieces nke egwuregwu vidio na gam akporo, ugbu a enwere egwuregwu 5 dị ugbu a na egwuregwu ọhụụ nke gafere ahịrị ndị a na vidiyo ọhụrụ emere. Anyị ga-agafe tupu a MMORPG dị ọcha, a nnukwu RPG na ọbụna a Spanish n'ichepụta ikpo okwu nke oké mma.
1 The Battle nke Polytopia
2 Obi uto
4 Nkọwa Rucoy
The Battle nke Polytopia
Ọnwa 2 gara aga, anyị nwere ohere izute RTS a na ntụgharị na oke mma na akụkụ a na-ahụ anya na nke miri emi. O yitere mmepeanya, n’agbanyeghi na enweghi ihe n’ile, n’agbanyeghi na o n’enye osisi eji nke ahụ ga - enyere anyị aka ịgbanwe agbụrụ anyị ka ọ nwee ike imeri ndị ọzọ asọmpi ndị na - alụ ọgụ maka otu ala ahụ.
Agha Polytopia - Egwuregwu Ọchịchị
Obere ọrụ nka maka egwuregwu egwuregwu dị egwu na-egosi na Happy Hop. Egwuregwu egwuregwu arcade nke agba ya, olee otú imewe si dị mma nke ihe odide na egwuregwu ha ngwa ngwa, bụ àgwà ya kachasị pụta ìhè ịghọ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị mma na nso nso a Storelọ Ahịa Google.
Ọ bụrụ na anyị ga-achọ RPG nke nwere amara nke Obi ụtọ, Postknight ga-abụ nhọrọ kacha mma Iji mee. A elu-ịrị elu RPG maka ya ihe gbasara nwoke na nwanyi na ji a imewe nke odide na ndị iro, nakwa dị ka ihe na-ekere òkè gameplay. Usoro abanyela n'egwuregwu ndị na-egwu egwuregwu ndị na-ekwesịghị iweda ha ala n'ihi na ọ nwere ụdị ọmịiko ahụ.
Obere oge, anyị nwere ike ịsị na anyị nọ n'ihu MMORPG kwụ ọtọ. Ma ọ bụ na site na Rucoy Online anyị na-etinye onwe anyị n'otu ụzọ ochie na nke ahụ na-aghọ otu n'ime ndị egwuregwu ahụ Ọtụtụ na-egwuri egwu n'ọtụtụ egwuregwu n'izu ndị gara aga. Ọ bụrụ n’icheghị ihu n’ihu PKs, egwuregwu a bụ maka gị maka oke omimi ya na inwe ike izute ọtụtụ ndị egwuregwu n’oge n’oge n’ụwa pụrụ iche.
Rucoy n'ịntanetị - MMORPG - MMO
Un pụrụ iche RPG n'ihi ịbụ onye na-enweghị nchegbu na maka inwe ezigbo ntọala, ebe ọ bụ na ị ga-eyi uwe nke anụ ahụ onye mmemme nke na-anaghị ahapụ ụlọ na onye bụ nwee ike ichota ulo mkporo na anyị ga-egwu mgbe e mesịrị. RPG nke nwere igwe egwuregwu nke anyị ga-adọta trajectory nke onye isi iji nwee ihe ịga nke ọma na ọkwa ọ bụla. Otu n'ime egwuregwu kachasị egwu egwuregwu anyị hụrụ n'oge na-adịbeghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » 5 egwuregwu ohuru ohuru ohuru na gam akporo
Naanị m mere egwuregwu egwuregwu Indie na isometric 3D n'ụdị nke 8bit batman nke 1986, nke a dị na java na-ejighị ịdị n'otu ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime injin ndị ahụ, ejiri m ihe na-agwakọta agwa agwa gafee karịa ụlọ 100 jupụtara na ọnyà na nnukwu anụ.
bụ nke a
Zaghachi Carlos Gomez
LG G6 na Galaxy S8 enweela ụbọchị mwepụta